Football Khabar » रोनाल्डो र एमबाप्पेलाई उछिन्दै मेस्सीले जिते अवार्ड !
रोनाल्डो र एमबाप्पेलाई उछिन्दै मेस्सीले जिते अवार्ड !
हालै कोपा अमेरिकामा नमिठो पराजय भोगेका अर्जेन्टिनी फरवार्ड लिओनल मेस्सीले अर्को अवार्ड जितेका छन् । गत सिजनको प्रदर्शनका आधारमा मेस्सीले ‘इएसपिवाई बेस्ट इन्टरनेसनल मेन्स फुटबल प्लेयर’ अवार्ड जितेका हुन् ।
यो पुरस्कार चर्चित सञ्चार संस्था ‘इएसपिएन’ले बर्सेनि दिने गर्छ । बुधबार सो संस्थाले पुरुष फुटबलतर्फको उत्कृष्ट खेलाडीको पुरस्कार ३२ वर्षीय मेस्सीलाई दिने घोषणा गरेको हो ।
यो पुरस्कार हरेक वर्ष फुटबल विधाबाट वर्षकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई दिइन्छ । यो पुरस्कार सन् १९९३ बाटै प्रदान गरिँदै आएको छ ।
मेस्सीले अवार्ड जित्दा उनले आफ्ना खास प्रतिस्पर्धी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, केलियन एमबाप्पे र भर्जिल भान डाइकलाई पछि पारे । जसमा मेस्सी पहिलो स्थानमा रहँदा रोनाल्डो दोस्रो, एमबाप्पे तेस्रो तथा भान डाइक तेस्रोमा रहे ।
प्रकाशित मिति २६ असार २०७६, बिहीबार ०५:४५